जनता भोट हाल्न लाईन बस्दापनि ओलीले सरकारले चुनाव सार्न खोज्यो भन्न बेर लगाउनुहुन्न : देउवा
काठमाडौं, ६ मंसिर । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनैपनि हालतमा चुनाव नसर्ने भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उक्त सन्देश सुनाईदिन पत्रकारहरुसँग आग्रह गरेका छन् । बुधबार ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन
‘राजा चाहिन्छ’ भन्ने मान्यता बोकेकाहरूलाई समाप्त पार्ने कांग्रेस नेता सिटौलाको चेतावनी
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् झापा क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौलाले ‘राजा चाहिन्छ’ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समाप्त पार्ने चेतावनी दिएका छन्। नेता सिटौलाले आफ्ना प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय
कांग्रेस सधैँभरी सत्तामै भएर देशको उद्योगधन्दा बन्द गरायो : राजेन्द्र महतो
धनुषा, मंसिर ६ । राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतोले मधेस र मधेशी जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारी मधेशवादी दलको काँधमा आएको बताएका छन् । धनुषाको नगराइन
कसलाई हाल्ने भोट ? भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ का मतदाता यसो भन्छन् …
६ मंसिर, काठमाडौं । जवाफ दिनुअघि उनले झ्वार्र सलाई कोरे र चुरोट सल्काए । ‘अरुको चान्सै छैन,’ एक फाँको धुवाँ उडाइसकेपछि भने, ‘हाम्रोमा नेमकिपा नै आउने हो ।’ उनी हुन्
चुनावपछि संघीय नेपालमा मन्त्री मात्रै १५० जना !
निर्वाचनपछि गठन हुने संघीय र प्रादेशिक सरकारका मन्त्रीको संख्य अधिकतम १५० जना हुने भएका छन्। संघीय नेपालमा मन्त्रीको संख्या १५० सम्म पुग्ने देखिएको छ। संविधानअनुसार यो भन्दा साने संख्यामा मन्त्रीमण्डल
नेपाल नै नआई अल्बर्ट आइस्टाइन कसरी बैज्ञानिक भए ? केपी ओलीको प्रश्न
सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ठूला दलका नेताहरुलाई बोलाएर आर्थिक विकासमा प्रतिवद्धता जनाउन लगाउने कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो, सोल्टी होटलमा । कार्यक्रम साढे ११ बजे हुने भनिएको थियो । तर,